“လုပျသငျ့လုပျထိုကျတာ ပွောသငျ့ပွောထိုကျတာတှေ ပွောခဲ့ရလို့ ပွညျသူတယောကျအနေ နဲ့ ဘယျတော့မှ နောငျတမရဘူး”ဆိုပွီး သူမရဲ့ခံယူခကျြကို ပွောပွလာတဲ့ ဖှေးဖှေး – Let Pan Daily
သရုပဆြောငြ ဖှေးဖှေးကတော့ မှနမြာနိုငငြံတှငြ လကရြှိဖှဈပေါနြတေဲ့ လူထုလှုပရြှားမှုတှမှော ပှညသြူတှနေဲ့ အတူ တဈသှေးတညြးတဈသားတညြး ပူးပေါငြးပါဝငနြသေူတဈဦးလညြး ဖှဈပါတယြ။ လကရြှိမှာတော့ အခှအနေအရေပရြပကြှောငြ့ ခတျေတခဏ တ.ိမြးေ.ရှာငနြရသေောလြညြး
လူမှုကှနျယကျမြားမှတဈဆငျ့ speak outလုပျပေးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှကေို သူမအတှကျ စိတျမပူစေ ဖို့ကိုလညျး အမွဲပွောနတောပါ။ လူထုလှုပျရှားမှုတှတေိုငျး ရှဆေုံ့းကနပေါဝငျနသေူဖွဈတာကွောငျ့လညျး ပရိသတျမြားက ဖှေးစိနျလေးရဲ့စိတျထားကို လေးစားခဈြခငျနကွေတာပါ။ သူမရဲ့ လှုပျရှားမှုတှတေိုငျးကိုလညျး အမွဲဝမြှေပေးလရှေိ့ပွီး မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး ဖှေးဖှေးရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ လကျရှိဖွဈနတေဲ့ အခွအေနမြေားနဲ့ပတျသကျပွီး သူမရငျထဲမှာရှိတဲ့ ခံယူခကျြတှကေို
သရုပျဆောငျ ဖှေးဖှေးကတော့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ တဈသှေးတညျးတဈသားတညျး ပူးပေါငျးပါဝငျနသေူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ အခွအေနအေရပျရပျကွောငျ့ ခတ်ေတခဏ တ.ိမျးေ.ရှာငျနရေသျောလညျး
လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့် speak outလုပ်ပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကို သူမအတွက် စိတ်မပူစေ ဖို့ကိုလည်း အမြဲပြောနေတာပါ။ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်း ရှေ့ဆုံးကနေပါဝင်နေသူဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပရိသတ်များက ဖွေးစိန်လေးရဲ့စိတ်ထားကို လေးစားချစ်ခင်နေကြတာပါ။ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းကိုလည်း အမြဲဝေမျှပေးလေ့ရှိပြီး မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ဖွေးဖွေးရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမရင်ထဲမှာရှိတဲ့ ခံယူချက်တွေကို
ရေးသားပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာတွေပြောခဲ့ရလို့ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်တော့မှ နောင်တမရပါဘူး ကိုယ့် ခံယူချက် ပြည်သူ့အမှန်တရားကို တသားထဲ အမြဲသစ္စာရှိသွားပါဦးမယ်၊ နေ့တိုင်းဆုတောင်းပေးပါ့မယ်။အားလုံး ဂရုစိုက်ကြပါရှင် ဘာလိုလိုနဲ့ ပိတောက်ပန်းတွေတောင်ပွင့်တော့မယ် နွေဦးလေးတို့ရယ်။ We Must Win”ဆိုပြီးတော့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ ဖွေးစိန်ရေ. Love you.
ဖြူဖွေးဝင်းဥ တဲ့ အလှတရားတွေ နဲ့ ရင်ခုန် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းနေပြီး ခေါင်းလေး လှုပ်ကာကနေ တဲ့ ဖွေးစိန်လေး ရဲ့ ဗီဒီယို